Iska horimaadyo tobon qof oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Mudug – SBC
Iska horimaadyo tobon qof oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Mudug
Ugu yaraan 10 qof ayaa la soo sheegayaa in lagu diley laba dhacdo oo kala duwan oo ka dhacdey gobolka Mudug, ka dib markii maleeshiyad hubaysan oo ka soo kala jeeda gobolada Mudug & Galguduud ku dagaalameen deegaanka Dhagtoor ee gobolka Mudug.
Weerar hubaysan oo galabta kooxo hubaysan ku qaadeen dad xoolo dhaqato ah oo ku sugnaa deegaan miyi ah oo ku tirsan tuulada Dhagtuur halkaasi oo ay ku dhinteen 7 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
Ilo wareed oo SBC ay ka helayso deegaankaasi ayaa sheegaya in weerarkan oo ay geysteen maleeshiyo ka soo jeeda degmada Cadaado ee gobolka Galguduud ay u geysteen xoolo dhaqato ka soo jeeda Koonfurta Gaalkacyo, iyadoo weerarkan la sheegay in loo adeegsadey baabuur dagaal.
Wararka ayaa sheegaya in weerarkan uu la xiriiro iska horimaad shaley galinkii dambe ka dhacay ceel biyood ku yaal deegaanka Dhagtuur.
Iska horimaadkaasi ayaa la soo sheegayaa in ay ku dhinteen laba qof 3 kalena ay ku dhaawacmeen.
Xiisado & dhiilo colaadeed ayaa laga soo sheegayaa deegaanada beelahani ay degan yihiin ee gobolka Mudug & Galguduud, iyadoo rabshadahani ay ku soo aadayaan xili beelahaasi heshiisyo ay dhawr goor gaareen, balse ay socon waayeen.
Cali Ismaaciil (Cali Yare)